သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ကိုကိုမောင် Hounslow မှာနေသည်
၀န်ခံချက်။ ဘကျောက်ရဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို နည်းယူခိုးချထားသည်။ ထို့နောက် ထင်ရာ မြင်ရာ ကြားရာများကို ဘကျောက်နည်းတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းသို့ ချပြလိုက်သည်။ ကျေးဇူးဘကျောက်။
အဲဒီနေ့က ပန်းမပွင့်ဘူး။ သစ်ရွက်မရှိဘူး။ သစ်သီးမသီးဘူး။ မြူတွေ ဆိုင်းနေတယ်။ နှင်းတွေ ဝေနေတယ်။ ရေခဲမှတ် နီးနီးရောက်နေတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ကျနော် လန်ဒန်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျနော် နေတဲ့ အရပ်က Hounslow ။
တုံးဖလားရွာအလယ်ပိုင်းမှာ အိမ်အိုကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ အဲဒီ အိမ်အိုကြီးမှာ အဘွားနှင့်မြေး နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတယ်။ အဘွားနာမည်က ဒေါ်ချစ်။ အားလုံးက ဖွားချစ်လို့ဘဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူ့မြေးလေးနာမည်က မောင်ခွေး။ မောင်ခွေးက သူငယ်တန်းအောင်ပြီး ပထမတန်း တက်နေတယ်။ စာသင်ကျောင်းက တုံးဖလားရွာမှာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ရွာသာယာဆိုတဲ့ မနီးမဝေးက ရွာကြီးတစ်ရွာမှာ ကျောင်းတက်ရတယ်။ စာသင်ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ဘုန်းကြီးကျောင်း နဘေးက ဖြတ်သွားရတယ်။ အဲဒီအခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေက ပါဠိရွတ်ပြပြီး စာသင်ကျောင်းသားတွေကို အနိုင်ယူလေ့ရှိတယ်။ စာသင်ကျောင်းသားတွေကလဲ အားကျမခံ အင်္ဂလိပ်စာရွတ်ပြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကို အနိုင်ယူလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီလို အပြိုင်အဆိုင်လေးတွေကြောင့်မို့လဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် မရတဲ့သူ မရှိဘူး။ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ရွတ်ပြနိုင်တယ်။ စာသင်ကျောင်းသားတွေကလဲ အင်္ဂလိပ်မီးနင်းတွေကို ရသလောက် ကျက်မှတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို အင်္ဂလိပ်မီးနင်းတွေ ကျက်တဲ့အထဲမှာ မောင်ခွေးက ထိပ်ဆုံး။
"Y-e-l-l-o-w (ရဲလိုး)= အ၀ါရောင်
S-l-o-w (စလိုး)= နှေးသော၊ ဖြေးသော
S-l-o-w-l-y (စလိုးလီး)= ဖြေးဖြေး
B-u-f-f-a-l-o (ဘတ်ဖဲလိုး)= ကျွဲ"
အဲဒီလို ဆင်တူစကားလုံးလေးတွေဆို ကပ်ပြီး မှတ်ရလွယ်လို့ မောင်ခွေးတစ်ယောက် သူ့အိမ်မှာ အင်္ဂလိပ် မီးနင်းတွေကို အကျယ်ကြီး အော်ကျက်နေတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ဖွားချစ်က ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။
"မောင်ခွေးရယ်။ တိုးတိုး ကျက်စမ်းပါ။ နင့် အင်္ဂလိပ်စာကြီးကလဲ ကြက်သီးထချင်စရာကြီး။ တ -ိုး ထဲ -ိုး နေတော့တာဘဲ။ ငါ နားရှက်တယ်" တဲ့။ ကဲ မှတ်ကရော။
မှတ်မိသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာ နေစဉ်တုန်းက ဂျပန်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက မြန်မာ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဒုလ္လဘ၀တ်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာစကား မတောက်တခေါက် လေ့လာပြီး တွေ့တဲ့အခါ မြန်မာလို နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူနှင့်အတူ ဂျန်းရှင်းအိတ်နားက စတိုးဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ဈေးသွားဝယ်တယ်။ ဈေးဝယ်သွားတယ်ဆိုတာထက် ကော်ဖီဖျော်သောက်ဖို့ ကော်ဖီပန်းကန်ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံး သွားဝယ်တာပါ။ ကျနော်ကလဲ အဖော်လိုက်သွားတာပေါ့။
ဆိုင်ရောက်တော့ ပန်းကန်တန်းဘက်ကို သွားတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကောင်မလေး ခပ်ချောချော တစ်ယောက်က ဘာလိုချင်လဲလို့ မေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဲဒီ ဂျပန်ဦးဇင်း ပူပူနွေးနွေးလေးက စင်ပေါ်ကနေ ပန်းကန်လေးကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်။ "ဒါကို ဦးဇင်း လိုချင်ပါတယ်" လို့ ပြောချင်တယ်ထင်ပါ့။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ စကားက မပီဘူးလေ။ ၀စ္စ မပေါက်သင့်တဲ့ နေရာမှာ ၀စ္စသွားပေါက်လိုက်တယ်။ သူပြောလိုက်တာက "ဒါကို ဦးဇင်း ကြိုက်တယ်။ အရမ်း -ိုး ချင်ပါတယ်" တဲ့။ စကား အသံကလဲ အားကြိုးမာန်တက် ခပ်ကျယ်ကျယ်ဘဲ။ အဲဒီမှာ အဲဒီကောင်မလေး မျက်နှာနီမြန်းသွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဂျပန်ဦးဇင်းက ဘယ်သတိထားမိမလဲ။ သူလိုချင်တဲ့ အကြောင်း သုံးလေးခါလောက် ဆက်ပြောနေတယ်။
အဲဒီလို ပြောရင်းနဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်း မိန်းခလေးက ယောင်ယမ်းပြီး ဦးဇင်းလက်ထဲက ပန်းကန်လေးကို လှမ်းယူမလိုလုပ်တယ်။ ဦးဇင်းလဲ လှမ်းယူမယ် အထင်နဲ့ လွတ်က လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်း မိန်းခလေးကလဲ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး။ လက်ကို ပြန်ရုပ်လိုက်တယ်။ ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလို သူယူမလို ကိုယ်ယူမလို လုပ်ရင်း ပန်းကန်လေးက ဘယ်သူ့လက်ထဲမှ မရောက်ဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျပြီး ကွဲသွားတယ်။ ကွဲသွားတယ်ဆိုတာထက် လက်ကိုင် ကျိုးသွားတာပါ။ ကောင်မလေးလဲ ရှက်လို့လား ဒါမှ မဟုတ် ပန်းကန်အစား သွားယူတာလား မသိဘူး။ အခန်းတစ်ခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး ပေါ်မလာတော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အခြားဝန်ထမ်း မိန်းခလေး တစ်ယောက် (မန်နေဂျာထင်တယ်) ရောက်လာတယ်။ ဘာများ အလိုရှိပါသလဲ ဘုရားလို့ ထပ်မေးတယ်။ ဂျပန်ဦးဇင်းကလဲ လုံးဝ လေမလျော့ဘူး။ လက်ကိုင်ကျိုးနေတဲ့ ကော်ဖီပန်းကန်လေးကို ကိုင်ပြီး "ဒါကို ဦးဇင်း အရမ်း -ိုး ချင်ပါတယ်"ချည်း ပြောနေတော့တာပါဘဲ။ အဲဒီမှာ အဲဒီ ၀န်ထမ်း မိန်းခလေးကလဲ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး။ ခပ်ကျယ်ကျယ် စကား တစ်ခွန်း ပြန်တုန့်ပြန်လိုက်တာ ကြားလိုက်ရတယ်။ "ဦးဇင်း.. အရမ်း -ိုးချင် မနေနဲ့တော့၊ ဒီမှာက ကွဲသွားပြီ။ အဲဒီ ကွဲသွားတဲ့ ပစ္စည်းအတွက် လျော်ကြေးပေးပါ"တဲ့။ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ အသံတူပါဘဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျသင့်ငွေပေးချေပြီး လက်ကိုင်ကိုင်းကျိုးနေတဲ့ ခွက်ကလေးကိုဘဲ ယူပြီး ပြန်လာခဲ့ရတော့တယ်။ နောက်မှ အဖြစ်မှန်ကို ဂျပန်းဦးဇင်းကို ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်။ သူ့ခမျာ အဲဒီ အခါကျမှ မျက်နှာကြီး နီတက်လာပြီး အရှက်ကြီး ရှက်နေလေတော့ရဲ့။
လန်ဒန်ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်းတက်တယ်။ သင်တန်းနေရာက Southall အရပ်မှာ ရှိတဲ့ Church ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲမှာပါ။ Southall Church လို့ဘဲ ဆိုကြပါစို့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံက လူမျိုးတွေက ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး။ အဲဒီ Southall က Th ကို F အသံဘဲ ထွက်တယ်။ ဿ်အသံမထွက်ဘူး။ ဘကျောက်နေတဲ့ အရပ်နာမည်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။ အဲဒါကြောင့် ဘကျောက်အသံထွက်သလို ထွက်လို့ ရမယ်ထင်ပါ့။ အဲဒီလိုဘဲ ထွက်လိုက်ကြပေါ့။
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာလူမျိုးတွေ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာဆိုင်ရာ အခမ်းအနားတစ်ခုခုရှိမှ အချင်းချင်း ဆုံဖြစ်ကြတယ်။ တစ်နေ့မှာ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျနော်သွားခဲ့တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတော်များများနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ အသိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့လို့ "ဟေ့... မတွေ့တာ အတော်ကြာသွားတယ်။ နင် ဘယ်မှာ နေလဲ" ဆိုပြီး မေးလိုက်မိတယ်။ "နင် South Park ကို သိလား"တဲ့။ "ဟာ.. သိတာပေါ့။ ဖူဟမ်နဲ့ မနီးမဝေး မြို့ထဲမှာဘဲ" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ သူက ပြန်ပြောတယ်။ "ငါ အဲဒီ South Park နားက အိမ်တစ်လုံးမှာ နေတယ်"တဲ့။ အဲဒီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ ပေါက်ဖော်တစ်ယောက် ပါလာတယ်။ သူ့နာမည်က Lee တဲ့။ Mr Lee ပေါ့။ တိုက်လဲ တိုက်ဆိုင်တတ်ပါ့။ ဒါနဲ့ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ပြီး Mr Lee ကို "Where do you live, Mr Lee?" လို့ မေးဖြစ်လိုက်တယ်။ သူကလဲ ပြန်ဖြေရှာပါတယ်။ "I live in South Park" တဲ့။ အင်း... Mr Lee က South Park မှာ နေတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူးနော်။ နားထဲမှာတော့ ကလိတိတိရယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်တော့ ၀င်စားစရာကောင်းသား။ အားတဲ့ တစ်နေ့တော့ အဲဒီ South Park နားတစ်လျှောက် လျောက်(ရှောက်)ပတ် လည်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။း))
လန်ဒန်ရောက်ပြီး တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ ဗန်ကောက်မှာ နေတဲ့ မြန်မာသူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပေါက်ချလာတယ်။ သူက ဟိုနိုင်ငံ ဒီနိုင်ငံတွေ ကူးနေပေမဲ့ ဘိလပ်စကားကိုတော့ ကောင်းကောင်း မတတ်ရှာဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ဘယ်လိုစကား စပ်မိမှန်းမသိဘူး။ တောင်ဆိတ်အကြောင်း စကားရောက်သွားတယ်။ တောင်ဆိတ်ရိုးက အရိုးကိုသန်မာစေကြောင်း၊ တောင်ဆိတ်လျာက ပိုစွမ်းကြောင်း ဒါကြောင့် တောင်ဆိတ်လျာ ရနိုင်ရင် ပိုကောင်းကြောင်း စကားစမြည် ပြောကြတာပေါ့။ အဲဒီမှာ အဲဒီ သူငယ်ချင်းက မေးတယ်။ "စကားမစပ်.. တောင်ဆိတ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို ခေါ်လဲ"ပေါ့။ ကျနော်လဲ အားကျမခံပါဘဲ။ "Antelope (အန်တီလုပ်) လို့ ခေါ်တယ်"လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဒါဆို သူ တစ်သက်လုံး အဲဒီ စကားလုံးကို မမေ့တော့ဘူးတဲ့။ သူ့မှာ အန်တီအရွယ် စော်တစ်ဗွေ ရှိလို့တဲ့။ ဘာဆိုင်လဲတော့ မသိ။း))
အဲဒီလိုနဲ့ သူ ဗန်ကောက် ပြန်သွားတယ်။ နောက်တစ်နှစ်မှာ သူ လန်ဒန် ထပ်ရောက်လာတယ်။ ယူကေက နဲနဲ ပျော်စရာကောင်းလို့ ပြန်အလည်လာတာတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ တောင်ဆိတ်ကို သတိရသွားပြီး သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ "မင်း... တောင်ဆိတ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်မီးနင်းကို မှတ်မိသေးလား"ဆိုတော့ သူက ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားတယ်။ အမှန်ဆို သူမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိတ်အလုံးကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်။ ကြည့်ဦး သူဖြေလိုက်တာက "Sisterlope" တဲ့။ ကဲဗျားးးး တစ်နှစ်အတွင်း အန်တီကနေပြီး ဆစ်စတားဆီ ပြောင်းသွားပြီထင်ပါ့။
မနှစ်တုန်းက မာစတာ ကျမ်းပြုစုနေရင်း Analytical study တို့ Critical thinking တို့မှာ အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း အသိမိန်းခလေး တစ်ယောက်ကို ပြောပြဖြစ်တယ်။ သူလဲ ယူနီတက်နေတာပါ။ သူက ပြောတယ်။ သူ့စူပါဗိုက်ဆာက အရမ်းတော်တယ်တဲ့။ ပီအိပ်ခ်ျဒီကို အောက်စ်ဖို့ဒ်က ရထားတာတဲ့။ ရေးပြီးသား တစ်ချို့တစ်ဝက် သူ့ဆီပို့ပေးချင်ရင် ကူညီပေးမယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် စာကို အရင် မစစ်ခိုင်းချင်ပါဘူး။ သူ့ဆီက အတုယူရအောင် သူ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရထားတဲ့ ကျမ်းကို အရင် ဖတ်ချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သူက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့.. သူက သူ့ပီအိပ်ခ်ျဒီ ကျမ်းကို ခြောက်ပတ်နဲ့ အပြီး ရေးထားတာတဲ့။ ကျနော်လဲ အံ့အားသင့်ပြီး "ဟင်းးး ခြောက်ပတ်ထဲ ရေးတယ်"လို့ ယောင်ယမ်း အော်ပြောလိုက်မိတယ်။ သူကလဲ "ဟုတ်တယ် ခြောက်ပတ်ထဲ" တဲ့ ပြန်ပြောရှာပါတယ်။ ဒါနဲ့ စကားက အဲဒီနားတင်ဘဲ ၀ဲနေတော့ သူက ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိဘူး။ စကားလုံး လွဲပြောတာ တွေ့ရတယ်။ "သူ့ကျမ်းက တစ်လခွဲနဲ့ အပြီးရေးထားတာ၊ ဒါကြောင့် အရမ်းကြီးတော့ Perfect မဖြစ်ပါဘူး"တဲ့။ ဒီဘက် နိုင်ငံတွေမှာ Week ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပိုအသုံးများတော့ Six Weeks ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာလို ပြန်ပြောရတာကတော့ နဲနဲ အခက်တွေ့နေသလိုပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ တော်ပါသေးရဲ့ တစ်လခွဲဆိုတဲ့ Synonym လေး ကယ်သွားပေလို့။
ခုဆို တုံးဖလားရွာက ဖွားချစ်ကြီး မရှိရှာတော့ဘူး။ သူ့မြေးလေး မောင်ခွေးကတော့ မုံရွာ တက္ကသိုလ်ကနေ အဝေးသင်နဲ့ ဘီအေ ဘွဲ့ရပြီး တုံးဖလားမှာဘဲ လယ်ထွန် ပျိုးနှုတ် ကောက်စိုက် လုပ်နေလေရဲ့။ တကယ်လို့ ဖွားချစ် သက်ရှိထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင်၊ တကယ်လို့ ကျနော်နဲ့ လန်ဒန်ကို အတူပါလာမယ်ဆိုရင်၊ တကယ်လို့ သသံသယဒေါသ သင့်စရာ စကားများကို ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖွားချစ်ရဲ့ နား ဘယ်လောက်တောင်များ ရှက်နေမလဲ မသိရှာဘူး။
"ဖွားချစ်ရေ... ကျနော် လန်ဒန်မြို့ရောက်နေတယ်။ နေတဲ့ အရပ်က Hounslow ပါ။ Southall (ေ-ာက်ဖော) မှာ အင်္ဂလိပ်စာ တက်တယ်။ အိမ်နားက ကားလမ်းဘေးမှာ Double Yellow line ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ South Park က ကောင်မလေးတွေ အလည်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်က မခေါ်ခဲ့နဲ့ ဆိုလို့ Mr Lee ကိုတော့ ခေါ်ခဲ့ကြလေ့မရှိပါဘူး။ အဲဒါပါဘဲ ဖွားချစ်ရေ။ တမလွန်ကနေ နားရှက်မနေနဲ့ဦးနော်"
ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော် Hounslow မှာ နေပါတယ်။ စာစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့.....
"ကိုကိုမောင် Hounslow မှာ နေသည် ပေါ့"း)))) ဟဲ ဟဲ ဟဲ ။
ဂါမ္မဒေါသသင့်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စေလိုလို့ပါ။ ညစ်ပတ်လိုတဲ့ စိတ်မရှိပါဘူး။း))))))
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:56
Wednesday,6April 2011 at 13:25:00 BST
တော်တော် ပေါက်ကရ ရေးတဲ့ လူဇီုးဂျီးဒွေ. .
Wednesday,6April 2011 at 14:44:00 BST
ရှားရျားပါးပါး မှတ်မှတ်ရရ နေရာလေးပဲနော်...အဟီးး
Wednesday,6April 2011 at 17:08:00 BST
south park နားမှာ Mr Lee နေတာကိုး
မသိပါဘူး.. မတောက်တစ်ခေါက် ဘာသာပြန်တာ
လေကွယ်ရာမှာ တောင်တယ် မှတ်တာ.
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ သူဂျီးရယ် ..
Wednesday,6April 2011 at 21:30:00 BST
ဟီးဟီးဟီး.. လုပ်တော့မယ်ဗျာ.. ရယ်၇တာ အူကိုတက်လို့... ဖွားချစ်တော့မသိဘူး.. ကျွန်တော့်တော့ တခွီးခွီးနဲ့...
Thursday,7April 2011 at 03:33:00 BST
Thursday,7April 2011 at 05:04:00 BST
အော်.. သူကြီး က အိုက်မှာ နေတာ ကိုး
Thursday,7April 2011 at 07:54:00 BST
Thursday,7April 2011 at 08:40:00 BST
သူကြီးမနိုင်ဘူး ဒီသူကြီးတော့ :P
Thursday,7April 2011 at 08:47:00 BST
ကျနော်လည်း ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ အကိုရာ ။ အကိုပြောတဲ့ မြို့တွေကိုး။
Thursday,7April 2011 at 11:19:00 BST
သြော် .. သူကြီး .. သူကြီးး ..
ရွာသူ ၊ ရွာသားတွေ ကို
ဖြန့်ဝေလိုက်တာကိုးးး .. haha .. ;))
Friday, 8 April 2011 at 06:09:00 BST
သူကြီးကလဲ ဟာဘဲ ဟာဘဲ ဟာဘဲ
Sunday, 10 April 2011 at 23:46:00 BST